Ukukhiqizwa Kwezinambuzane Ezithuthukisiwe nge-Ultrasonics - Hielscher Ultrasound Technology
Izinambuzane zingumthombo ozinzile, okhula kalula wamaprotheni asezingeni eliphakeme wokudla okunomsoco kanye nama-lipids. Ukuze uhlukanise amaprotheni nama-lipids ezinambuzaneni, isizinda se-ultrasonic sisetshenziswa njengobuchwepheshe obusebenza kahle futhi obunokwethenjelwa. I-Ultrasonication ifakazelwe amazinga aphezulu wokukhipha, amaprotheni aphezulu kanye ne-lipid isivuno, kanye nokucubungula okusheshayo kwezithako zezinambuzane ezisezingeni eliphakeme.
Ukukhishwa kwe-Ultrasonic kwamaphrotheni ezinambuzane
Izinambuzane ezinjengekhilikithi, izikelemu, izimpukane nezibungu zinothe ngamaprotheni. Ukuze kufezwe isidingo esikhulayo samaprotheni asezingeni eliphakeme, izinambuzane zithole inani njengomthombo wamaphrotheni onempilo, ozinzile futhi onobungozi kwezemvelo, osetshenziselwa ukudla kwabantu, ukudla kwezilwane ezifuywayo kanye nokudla kwemfuyo. Izinambuzane ziyi-ectothermic (okusho ukuthi banegazi elibandayo futhi abachithi amandla ukukhiqiza ukushisa ukukhuphula izinga lokushisa komzimba wabo), abadingi isikhala esiningi, futhi bangaphakelwa kusetshenziswa imfucuza njenge-substrate yokukhula. Lokhu kwenza amaprotheni ezinambuzane nama-lipids abe ngumthombo wokudla othembisayo, ongasiza ukugcwalisa "igebe lamaprotheni", okumele linqotshwe ukondla inani labantu elikhulayo emhlabeni kanye nesidingo salo sezakhamzimba ezisezingeni eliphakeme, ikakhulukazi amaprotheni.
Ukukhula Kwezinambuzane: Izinambuzane zenziwa emapulazini ezinambuzane, lapho zikhuliswa khona ezitsheni noma kumishini yokuphendula. Ngenzuzo yokuba yizidalwa ezikhula ngokushesha, zidinga ukunakekelwa okuphansi uma kuqhathaniswa, zingondliwa ngemfucumfucu engokwemvelo, futhi zilinywa ngokushesha ukuze zivune usayizi noma ukuvuthwa. Ikakhulukazi izibungu ezindizayo, izikelemu zokudla namakhilikithi kulula ukuzala. Ngokuphathelene nokusebenza kahle, izibungu zempukane yesosha elimnyama ziyaziwa ngokuguqulwa kwazo okuhle kakhulu kwemfucumfucu ephilayo ibe amaprotheni asezingeni eliphakeme. yingakho impukane yesosha elimnyama yaziwa nangokuthi "indlovukazi yokuguqulwa kwemfucuza" ngaphansi kwabalimi bezinambuzane.
Izinyathelo Zokucubungula Zokudla Kwezinambuzane: Lapho izinambuzane sezifinyelele usayizi wazo ezihlosiwe noma inkundla yezemidlalo, ziyavunwa. Lokhu kusho ukuthi zikulungele ukucutshungulwa kube izithako zokudla. Ngaphambi kokucubungula, izinambuzane zigezwa ngamanzi, zihlungulwe bese zigcinwa ziphila ngo-4 ℃ cishe usuku olulodwa ngaphandle kokuphakelwa.
Ngemuva kwalokho, izinambuzane ziyaphekwa, bese zomiswa umoya oshisayo kakhulu noma ngokuzifudumeza esitsheni. Ukwelashwa ngokushisa nakho kudinga ukubulala amagciwane. Ekugcineni, izinambuzane zigaywa zibe yisinambuzane esomile (esaziwa nangokuthi ufulawa wezinambuzane). Isidlo sezinambuzane singasetshenziswa njengesithako sokudla noma isithasiselo sokudla kwesilwane. Kepha ukuze kuphuculwe futhi kuthuthukiswe isidlo sezinambuzane, kukhishwa izithako ezibaluleke kakhulu, okusho amaprotheni nama-lipids. Amaprotheni wezinambuzane amsulwa ikakhulukazi abhekwa njengesithako esinomsoco omkhulu, esisetshenziswa kuma-protein bar, ama-protein powders nanjengezengezo kwimikhiqizo eminingi yokudla njengezimpahla ezibhakiwe, ama-chip, ama-crackers njll.
Ukukhishwa kwe-Ultrasonic kwamaphrotheni ezinambuzane:
Isizinda se-Ultrasonic sisetshenziselwa ukukhiqiza amaprotheni powders, ama-hydrolysates, namaprotheni ahlukaniswa nezinhlobo eziningi zezinambuzane, kufaka phakathi izimpukane, izikelemu, izimbungulu, amakhilikithi nezibungu. Ngokukhipha amaprotheni asezingeni eliphakeme ekudleni kwezinambuzane, i-ultrasonication ikhiqiza izithako zokudla ezisebenzayo ngephrofayili ephezulu yokudla okunempilo.
Izinzuzo ze-Ultrasonic Protein Extraction kusuka Izinambuzane
I-Ultrasonication isetshenziswa kabanzi ukukhipha nokwelapha amaprotheni avela emithonjeni ehlukahlukene njengama-botanicals (isb. Kusuka ku-soy, irayisi, i-rapeseed, i-sunflower, imbewu yamathanga njll.), Ubisi (isib. , calcium caseinate), ulwelwe (isb. izimila zasolwandle), izinhlanzi zasolwandle (isib. imikhiqizo yezinhlanzi nemfucuza yasolwandle), nezinambuzane (isib. izikelemu, izibungu, izimpukane, izimpethu, amabhungane, amakhilikithi, amaphela njll.).
Njengobuchwepheshe obusebenza kahle kakhulu, futhi obuluhlaza bokukhipha, ukukhishwa kwe-ultrasonic kwamaprotheni ezinambuzane kutholakele indawo yayo ekukhiqizeni izinambuzane zamaprotheni eziyimpuphu, ama-hydrolysates kanye nokuzihlukanisa. Ngenxa yokuthembeka kwenqubo ephezulu, ukuphindeka kanye nokukala okuqondile, i-ultrasonication isetshenziselwa ukukhipha amaprotheni ezinambuzaneni, ukuguqula ukwakheka kwamaprotheni nokwenza ngcono izakhiwo zemvelo zamaprotheni.
Isibonelo, uMintha et al. (2020) kusetshenziswe isizinda se-ultrasonic kwizibungu ezimnyama zesosha (H. illucens). Babika ukuthi i-sonication ithuthukise ukwakheka kwamaprotheni, ukusebenza kwamaprotheni okushintshiwe, futhi ngenxa yalokho kunenzuzo ekukhiqizeni iH. Kukhanyisa amaprotheni / ama-hydrolysates. Ikakhulu, amandla we-zeta, ukusabalalisa, kanye namanani we-thiol akhuliswe nge-ultrasonication. Ngaphezu kwalokho, ubukhulu nobukhulu bezinhlayiyana zamaprotheni bancipha ngemuva kwe-sonication. I-Ultrasonication inyuse kakhulu ukukhanya (L *) kwamaprotheni ahlukaniswa ngo-x ¯ 7.46% ngokuqhathaniswa nolawulo olungelona olwe-sonicated.
umshini we-ultrasonic I-UIP2000hdT (2kW) nge-batch reactor
I-UIP4000hdT, i-4000watts enamandla yezimboni zesheya yokuxuba ephezulu yokukhipha okusemgqeni kwamaprotheni avela ezitshalweni, izinambuzane kanye nokudla kwasolwandle.
Ama-Ultrasonicators Wokusebenza Okuphezulu Wokucubungula Kwamaprotheni
Isizinda se-Ultrasonic kanye ne-homogenisation ubuchwepheshe bokusebenza obunokwethenjelwa, obusiza futhi busheshise ukukhiqizwa kwamaprotheni ezinambuzane aphezulu. Iphothifoliyo yeHielscher Ultrasonics ifaka uhla oluphelele kusuka kuma-compact lab ultrasonicators kuya kumasistimu wokukhipha ezimbonini. Ngaleyo ndlela, thina kwaHielscher singakunikeza i-ultrasonicator efaneleke kakhulu kunqubo yakho ebekiwe yenqubo. Abasebenzi bethu besikhathi eside abanolwazi bazokusiza ekuhlolweni okungenzeka nasekusebenziseni inqubo ekufakweni kohlelo lwakho lwe-ultrasonic ezingeni lokugcina lokukhiqiza.
Ukuphrinta konyawo okuncane kwama-extractors ethu e-ultrasonic kanye nokuguquguquka kwawo ekukhethweni kokufaka kubenza balingane ngisho nasezikhungweni zokucubungula amaprotheni ezinambuzane ezincane. Amaprosesa e-Ultrasonic afakiwe emhlabeni wonke ezindaweni zokukhiqiza zokudla nezomsoco kanye nasekukhiqizweni kokudla kwezilwane ezifuywayo nemfuyo. Ngaphezu kwalokho, abaxube be-shear abaphezulu be-shear bakulungele ukwakha amaprotheni ezinambuzane emikhiqizweni yokudla yabantu kanye nokudla kwezilwane ezihambisana nezilwane kanye nokudla kwemfuyo yezilwane zasemapulazini.
Iphothifoliyo yomkhiqizo we-Hielscher Ultrasonics ihlanganisa uhla oluphelele lwe-extractors ephezulu ye-ultrasonic kusuka ezincane kuya ezinkulu. Izesekeli ezingeziwe zivumela ukuhlangana okulula kokucushwa okuhle kakhulu kwedivayisi ye-ultrasonic yenqubo yakho yamaprotheni enambuzane. Ukusetha okulungile kwe-ultrasonic kuya ngomthamo ocatshangelwe, ivolumu, impahla eluhlaza, inqubo ye-batch noma i-inline kanye nomugqa wesikhathi.
Ama-ultrasonicators ama-Hielscher angasetshenziselwa ukuqhutshwa nokuqhutshwa kokugeleza okuqhubekayo. Ukucubungula kwe-batch ultrasonic kufanelekile ekuhlolweni kwenqubo, ukwenziwa kahle futhi kube sezingeni eliphansi lokukhiqiza likasayizi ophakathi. Ngokukhiqiza inani elikhulu lamaprotheni ezinambuzane, ukucubungula okusemgqeni kungasiza kakhulu. Ngenkathi ukushaywa kudinga ukusethwa okulula kakhulu, kuba isikhathi esithe xaxa nokusebenza ngamandla. Inqubo eqhubekayo yokuxuba emugqeni idinga ukusethwa okuyinkimbinkimbi – equkethe iphampu, amapayipi noma amapayipi namathangi -, kepha isebenza kahle kakhulu, iyashesha futhi idinga abasebenzi abancane kakhulu. I-Hielscher Ultrasonics inokusetha okufanele kakhulu kokukhipha ivolumu yesizinda sakho nezinhloso zenqubo.
Onke ama-ultrasonicators aseHielscher alawulwa kahle futhi ngaleyo ndlela enokwethenjelwa amahhashi omsebenzi ekukhiqizeni. I-amplitude ingenye yezinqubo ezibalulekile zenqubo ezithonya ukusebenza kahle nokusebenza kahle kwesizinda se-ultrasonic sezakhi ezinambuzaneni.
Izinto zezinambuzane ezinjengezibungu nezimpukane zidinga i-sonication enamandla nezilungiselelo eziphansi ze-amplitude, ngenkathi amakhilikithi nezinambuzane ezinegobolondo elincane elingaphandle zidinga i-sonication kuma-amplitudes aphakeme ukukhipha izakhi eziqondisiwe. Zonke Hielscher Ultrasonics’ amaprosesa avumela ukumiswa okuqondile kwe-amplitude. I-Sonotrodes nezimpondo ze-booster yizinsiza ezivumela ukuguqula ubukhulu endaweni ebanzi kakhulu. Amaprosesa aseHielscher ezimboni ze-ultrasonic angaletha ama-amplitudes aphakeme kakhulu futhi ahambise amandla adingekayo e-ultrasonic wezicelo ezifunwayo. Amplitudes afika ku-200µm angaqhutshwa ngokuqhubekayo ngokuqhubekayo ekusebenzeni okungama-24/7.
Izinqubo ze-Ultrasonic zingalinganiswa ngokuphelele. Lokhu kusho ukuthi yonke imiphumela oyizuzile usebenzisa ilebhu noma ibhentshi-phezulu i-ultrasonicator, ingakalwa ngokukhishwa okufanayo kusetshenziswa amapharamitha wenqubo efanayo. Lokhu kwenza i-ultrasonication ilungele ukuhlolwa okungenakho ubungozi, ukwenziwa kwenqubo nokwenza okulandelayo kokukhiqizwa kwezentengiso. Xhumana nathi ukuze ufunde ukuthi i-sonication ingakhulisa kanjani ukukhiqizwa kwakho kwamaprotheni ezinambuzane.
Ukusetshenziswa kwesinambuzane njengenhlanganisela yokudla okunomsoco ukondla abantu nezilwane kubizwa nge- "entomophagy". I-Oxford Online Dictionary ichaza igama elithi “entomophagy” ngokuthi “umkhuba wokudla izinambuzane, ikakhulukazi abantu.” Njengoba izinambuzane zingumthombo osimeme ogcwele amaprotheni asezingeni eliphakeme kanye nama-lipids, izinambuzane ezinjengezinyendle, izimpukane, izibungu, izikelemu, izimpethu, amabhungane namaphela ziyatshalwa futhi kusetshenziselwe ukukhiqizwa kwamaprotheni namafutha acid okunomsoco womuntu nowezilwane.
Izinambuzane njengoMthombo Wamaphrotheni Anomsoco
Izinambuzane zaziwa njengomthombo wamaprotheni asezingeni eliphakeme, aqukethe ama-amino acid amaningi abalulekile. Ngakho-ke, amakhilikithi amaningi, izintethe, amabhungane, amabhu, izimpethu, izimpukane nezinye izinambuzane ezahlukahlukene zikhiqizwa ukukhiqiza amaprotheni azosetshenziswa ngabantu nasezilwaneni. Ngaphandle kokunotha ngamaprotheni, izinambuzane futhi zingumthombo obalulekile wamafutha acid, amaminerali (isib. I-iron, i-zinc, i-potassium, i-selenium, ne-copper) kanye namavithamini (ikakhulukazi amavithamini we-B). Isibonelo, izinambuzane ezinjengezinyendle kanye nezibungu zokudla zinokugxila okuphezulu kwamaprotheni aphelele, i-vitamin B12, i-riboflavin ne-vitamin A.
Ngokuphikisana nemikhiqizo ethathwe ezilwaneni, izinambuzane ziqukethe nefayibha yokudla. I-fiber yezinambuzane itholakala kakhulu nge-chitin, okuyisakhiwo esibalulekile se-exoskeleton.
Izinambuzane ezivame ukukhiqizwa zokukhiqiza amaprotheni yizinhlobo ezilandelayo:
Umbungu (Tenebrio Molitor L.) uhlobo lwezibungu lohlobo lwamabhungane amnyama (Coleoptera). Izinga lokushisa lokugcina elikhulu kakhulu lingama-25 ̊C – I-27 ̊C kanye nokukhula kwayo kombungu kuhlala izinsuku ezi-4 - 6. Inesikhathi eside sezibungu esingaba yingxenye yonyaka lapho izinga lokushisa elikhulu nomswakama ophansi unqamuka. Okuqukethwe kwamaprotheni wezibungu zeTenebrio Molitor nabantu abadala kungama-46.44% no-63.34%, ngokulandelana.
Ikhilikithi yendlu (i-Acheta domesticus) iyinhlobo yekhilikithi evame kakhulu esetshenziselwa ukudliwa ngabantu. Ikhilikithi yaziwa njengenye yezinambuzane ezidliwayo ezinomsoco kakhulu. Amakhilikithi angadliwa omisiwe, abhakwe, athosiwe kakhulu, abilisiwe noma asetshenziswe njengesithako sokudla. Ukuhlanganisa amakhilikithi ekudleni okusebenzayo, ukwakheka kokudla noma izindlela zokupheka, isidlo sekhilikithi noma ufulawa kuyasetshenziswa. Isidlo sekhilikithi siyimpuphu yamakhilikithi omisiwe futhi acolekile. Amakhilikithi akhula ngokushesha futhi ngokuvamile akhule ngokugcwele phakathi kwamasonto amathathu -4. Owesifazane ngamunye angabeka amaqanda asuka ku-1,200 kuye ku-1,500 emavikini ayi-3-4. Ngenxa yokukhula okusheshayo nokulula, amakhilikithi alinyelwa ukondliwa komuntu kanye nokudla kwezilwane. Amakhilikithi ngokuvamile abulawa yiqhwa elijulile, lapho bengezwa buhlungu futhi bathanjiswa ngaphambi kokufa kwemizwa.
Impukane yesosha elimnyama (iHermetia illucens) iyimpukane ejwayelekile futhi esabalele yomndeni waseStratiomyidae. Izimpukane zamasosha amnyama zilinywa kabanzi ngenxa yamaprotheni aphezulu ahlukile kanye nezidingo eziphansi ngesikhathi sokuzala nokukhula. Zidinga izinsizakusebenza ezimbalwa kakhulu, ezenza ukuthi ukwazi ukuphatha kahle imfucumfucu yezinto eziphilayo. Izibungu ezihamba ngamasosha amnyama (BSFL) ziqukethe ama-protein angama-43%, ama-acid angama-35%, futhi acebile nge-calcium nezinye izakhamzimba ezincane. Njengoba izibungu zinamaprotheni aphakeme kakhulu, izimpukane zamasosha amnyama zizalelwa i-approx kuphela. Izinsuku eziyi-18 baze bafike enkundleni yezinambuzane bese bevuna. Umjikelezo wokuphila ophelele wendiza yesosha elimnyama unamaviki ayisithupha kuphela.
Izimpungushe ze-Black soldier (i-Hermetia illucens) nazo zisetshenziswe ngempumelelo njengomthombo wokukhipha ama-lipids, abekade esetshenziswa kamuva i-nano-emulsified yi-ultrasonication.